Iindaba - Kutheni iprofayile yealuminium isifa - ukuvula isiko ngakumbi nangakumbi?
Kutheni iprofayile yealuminium isifa - ukuvula isiko ngakumbi nangakumbi?
Iphrofayili yealuminium yohlobo oluthile lwealuminium alloy extrusion eveliswa ngumzi mveliso osetyenzisiweyo kwimveliso yeprofayile. Iprofayili yeAluminiyam iyafa ngokwezifiso ithetha ukuba ukongeza kulawo ma-20,30,40,50,60,80,90,100,120 kunye nolunye uthotho oluqhelekileyo lwealuminiyam, iprofayili yealuminiyam inganalo nolunye uhlobo lwecandelo, kungoko iprofayili engaqhelekanga yealuminium ifa ngokwezifiso. Ayisiyo ulwenziwo eyahlukileyo, kukwenza ngokwezifiso okwahlukileyo.
Iphrofayili yeAluminiyam iyafa - ukuvula isiko kuyinkqubo efanayo yemveliso kunye nenkqubo. Oko kukuthi: imveliso yokuqala ngumngundo abaqeqeshiweyo, uze ulungiselele bar aluminium ingxubevange bar, kwaye ke kwimveliso extrusion umatshini kunokuba. Ukubumba ngokubanzi kuyilelwe ngokwendlela elungileyo yomsebenzisi, icandelo lealuminium eyahlukileyo, ukusebenza kunye nobunzima bemitha kunye nezinye izinto azifani. Iphrofayili ye-aluminium evaliweyo evulekileyo kunye neprofayili ye-aluminium yesiqhelo akukho mahluko, nokuba yeyiphi na into okanye unyango lomphezulu, ukongeza kulwenziwo, ezinye ziyafana.
Kwiminyaka yakutshanje, isabelo sentengiso se-aluminium yokuvula ukungunda kunye nokwenza izinto ngokwezifiso kuye kwanda. Esona sizathu siphambili kukuba ukunyuka kweshishini lokuzenzekelayo kuqhube ukusetyenziswa kweemveliso zentsimbi eyahlukileyo. Ukuveliswa ngakumbi nangakumbi kweemveliso zealuminiyam, ke iprofayili yokufa kokuvula isiko ngakumbi nangakumbi, iyafuneka ngakumbi nangakumbi. Maninzi amacandelo amatsha, anje nge-zigzags, zigzags kunye neemilo ezingaqhelekanga, kunye nokugqitywa kombala ogqityiweyo.
Ukwenza ngokwezifiso ibe ligama eliqhelekileyo ebomini, elikwinqanaba lokukhanya okutyebileyo okuhlala kuthethwa ngabantu. Iphrofayili ye-Aluminium yokuvula isiko lokuvumba yenye inkalo ye-aluminium ye-alloy industry, le mveliso ye-aluminium ye-alloy field, i-profile ye-aluminium yokuvula isabelo sokwanda sikhulu, sisetyenziswa ngokubanzi, isidingo sokwenza izinto ezintsha kunye nophuhliso ukuhlangabezana neemarike eziguqukayo.